Uncategorized မော်ကွန်း | Mytrickstips
Home // အမျိုးအစား: Uncategorized
အဒ်မင်အားဖြင့် 20 သြဂုတ်လ 2019,
Xbox လက်ဆောင်ကဒ်ကျွန်တော်တို့ဟာ, Xbox လက်ဆောင်ကဒ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ခိုင်မာသောခြေကုပ်ရှိသည်ဟန်ဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့, Xbox လက်ဆောင်ကဒ်စျေးကွက်လေ့လာစူးစမ်းဖို့အကြီးအတိုအရှည်နှင့်စရိတ်မှဝင်ကြပြီ။ လမ်းတစ်လျှောက်, ငါတို့ရှိသမျှသည်ရူပနှင့်မျှမတို့ပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်ကြောင်းဆိုဒ်များတစ်ပင်ပန်းတယ်အရေအတွက်ကဖြတ်ပြီးလာကြ၏။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးစကားပြောကျနော်တို့ဖမ်းမိခဲ့သည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
အလုပ်လုပ်ကြောင်းအခမဲ့ရေနွေးငွေ့လက်ဆောင်ပေးမယ် Card များကို Generator ကို! ကျနော်တို့အမှုအရာ sugarcoat သို့မဟုတ်သင့်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်စိမ်ဖို့ကဒီမှာမရှိကြပေ။ အခမဲ့ရေနွေးငွေ့ codes တွေကိုသင့်ရဲ့ရေဒါပေါ်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အအေးကြေငြာရှိသည်။ သင်သည်မည်သည့်သံသယမရှိဘဲအင်အားစိုက်ထုတ်ထုံးစံ၌သူတို့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် "ငါသည်အခမဲ့တယ်" မိန့်ခွန်းအဘို့ပြင်ဆင်ရလိမ့်မည်။ ဟုတ်ကဲ့ ... ဆက်ဖတ်ရန်
သငျသညျအခမဲ့အမှုအရာရနိုင်မယ်ဆိုရင် 100% အလုပ်မလုပ်အခမဲ့ PSN ကုတ် General ကအေးမြမဖြစ်ပါ့မလား အစဉ်အဆက်ခလုတ်ကို့ကလစ်နှိပ်နှင့်အတူတစ်ခုခုရရှိ၏အတွေးရှိခဲ့? အဲဒီမှာအထဲကလူအများ၏အများစုမှာအခုအချိန်မှာအွန်လိုင်းအခမဲ့ခရက်ဒစ်သို့မဟုတ်အခမဲ့ PSN codes တွေကိုအဘို့အကြောင်း Google တွင်ရှာဖွေနေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ PSN ကုဒ်မီးစက်နှင့်အတူစစ်မှန်သည့်ရလဒ်များကိုရှိပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
Google ကလက်ဆောင်ကဒ်အခမဲ့ Google play စလက်ဆောင်ကဒ်ရယူခြင်း Play ကိုဆုံးရှုံးမေတ္တာကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ကံမကောင်းစွာအခမဲ့ Google play စလက်ဆောင်ကတ်များသူတို့ကိုယ်သူတို့တင်ပြမည်မဟုတ်; သင်သည်ထိုသူတို့ထွက်ရှာရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအနေဖြင့်ပတ်ပတ်လည် goofing ပြီလျှင်, သင်ကံကောင်းပါစေယနေ့ဖြစ်ကြ၏။ အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့စားပွဲပေါ်တွင်သင်အဘို့အရှိရွှေစင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ... ဆက်ဖတ်ရန်
အခမဲ့ Amazon လက်ဆောင်ကဒ်ကုဒ် gen ...
သင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာအခမဲ့အမေဇုံလက်ဆောင်ပေးမယ် Card များကို! အမေဇုံလက်ဆောင်ကတ်များတစ်ဦးဆိုး-in-the-သိုးမွှေးလိုအပ်မကျမည်အကြောင်း, ဒါပေမယ့်သူကတဦးတည်းနှင့်လူအပေါင်းတို့အားအယူခံပါဘူး။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ကဧရာ e-commerce ပလက်ဖောင်း -Amazon အောက်မှာနီးပါးဘာမှဝယ်ယူရန်ပြီးပြည့်စုံလ်လက်ဆောင်ပေးခြင်း option ကိုပါပဲ။ သငျသညျအခမဲ့အမေဇုံလက်ဆောင်ကတ်များသွင်းယူခက်ခဲတဲ့ကံကောင်းပါစေခဲ့လျှင်, သင်တစ်ဦးတည်းမဟုတ်ပါ။ ယုံပါ..... ဆက်ဖတ်ရန်
Legit နှင့်အခမဲ့ iTunes ကိုလက်ဆောင်ပေးမယ် Card များကို Generator ကိုဘဝအကြောင်းကိုအဓိပ္ပါယ်အရာထိုကဲ့သို့သောအခမဲ့နေ့လည်စာအဖြစ်မျှထိုကဲ့သို့သောအရာလည်းမရှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ မှန်သည်မဟုတ်လော ကောင်းပြီ, မအမြဲ။ မျှော်လင့်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ယခုအချိန်အထိရေးထားပြီဘယ်သို့သောအားဖြင့် aback ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်မဟုတ်။ ဘယ်လိုကြောင့်ဝယ်မယ့်ပြီးနောက်ပတ်ရစ်, ရှည်လျားခံစားနိုင်မယ့်ကံကောင်းလက်ခံရရှိသူတစ်ခုခု gifting အကြောင်းကို ... ဆက်ဖတ်ရန်